PressReader - Ilanga: 2018-07-05 - Bebedliwa yingebhe abaseshi
Bebedliwa yingebhe abaseshi
Baphenya icala logixabezwe iminyaka engama-300 ebhadla ejele
Ilanga - 2018-07-05 - Izindaba - NONHLAKANIPHO SHINGA nonhlakaniphos@ilanganews.co.za
UNCOMA ukusebenzisana okuhle ngendlela eyisimanga okube phakathi kwakhe nozakwabo uDetective Sergeant Sifiso Shange, obeyingxenye yethimba ebelihamba phambili ekuphenyeni icala ebelihlasimulisa umzimba lokubulawa komndeni wakwaMzila kwa-G, eMlazi.
Emasontweni amabili edlule iNkantolo eNkulu yaseThekwini, igwebe uSanele Makhanya (27) iminyaka ewu-300 ebhadla ejele, ngamacala awu-20 kanti uSibonelo "Nkalakatha" Jali ushonele emagcekeni akwaMzila ngemuva kokufika kwamaphoyisa wavele wavulela inhlamvu.
Kulesi sigameko kudutshulwe kwabulawa uNkz Sibongile Mzila (59), uNkz Hlengiwe Mzila (33), uMnu Mlungisi Mzila (32) noMnu Lungisani Mzila (25).
Ekhuluma neLANGA uDet Sgt Shange, uthe usebenzisane ngokukhulu ukubambisana noSgt Bonginkosi Dlamini osebenza ngaphansi kophiko iTask Team, KwaZuluNatal.
Uthe amalungu omndeni wakwaMzila abulawe nguSanele nomngani wakhe uSibonelo "Nkalakatha"Jali. Utshele ukuthi isimo abasifice kwaMzila besihlasimulisa umzimba.
Uthe ukubona isimo umndeni obukusona ngemuva kwalesi sigameko nokubulawa ngesihluku kwabantu bengenacala, yikhona okubenze basebenza ngokukhulu ukuzimisela.
"Lesi sigameko senzeke mhla ka-25 kuMasingana (January) ngonyaka odlule, ngitshelwe ngaso ezintatha ngoba bengivele ngiphenya icala lamantombazanyana amathathu adlwengulwe ekubo.
"Kube sekungenelela abaseshi bobugebengu obuhleliwe, okuyibona abanikezelwe icala. Ngisebenze nomseshi uDlamini ngoba nami bengivele ngiphenya icala abebethinteka kulona,” kusho uDet Sgt Shange.
Uthi leli cala lenzeke kunguLwesihlanu, kuthe ngoMsombuluko esesiteshini samaphoyisa, kwangena impimpi yakhe yamtshela ukuthi iyamazi umsolwa ofunwa ngamaphoyisa ngoba udaba lwabo beselusabalele ezindabeni.
“Ngenhlanhla naye uDlamini ubesesiteshini ngaleso sikhathi, okwenze kwabalula ukuthi sivele sisuke ngaleso sikhathi silibangise khona,” kusho yena. Uma echaza, uthi uSanele noNkalakatha besebenomjondolo kwa-N, eMlazi lapho abesebehlala khona, okuyindawo okunzima ukuhamba uze ufike kuyona.
“Sifike ehleli nentombi yakhe, ebhema ugwayi engasilindele. Kube nzima ngisho ukuthi kube khona akuzamayo ngoba ubethukile,” kusho yena. Uthe uSanele utholakale nesibhamu sohlobo lwe38 esingekho emthethweni, kodwa uthi kwasibhamu leso uze waboshwa esasiphika njengoba ebephika wonke amacala abebekwe wona.
Utshele ILANGA ukuthi wulibofuzo (DNA), olutholakale kwesinye sezisulu ezidlwenguliwe oluvezile ukuthi ngempela uSanele ubekhona kubadlwenguli ngoba kwalona lelo cala ubeliphika yize esinye sezisulu besimazi, simbiza ngegama.
USgt Dlamini uthi bekunzima kakhulu ukusebenza leli cala kodwa into ebeyibakhuthaza kakhulu wukufuna ukuqinisekisa ukuthi imindeni ethintekile, okungenani yazi ukuthi abenze lesi sigameko bajezile.
"Baningi abantu abahlukunyezwe yilaba, kuhlanganisa unogada abambulale bamphuca isibhamu, abantu abawu-9 ababahlasele babalimaza bengenzanga lutho. Sinethemba nje lokuthi okungenani bazokwazi ukwamukela bazame ukwedlulisa baqhubeke nempilo yabo, bazi ukuthi ababulali bajezisiwe,” kusho Sgt Dlamini osebenzela eMgungundlovu, oneminyaka ewu-14 engumseshi.
BEBENOVALO SEBETHOLE UMKHONDO WOMBULALI
Laba baseshi bathi nabo bebedliwa yingebhe ngesikhathi bethola umkhondo ngoSanele ngoba bebengazi ukuthi uzokwenzani. "Besesilindele noma yini ngoba besekubonakala ukuthi bangabantu abanodlame futhi ubesazi ukuthi nozakwabo usefile. Sibe nenhlanhla yokuthi-ke sitheleke engasilindele wangakwazi ngisho ukunyakaza,” kusho uSgt Dlamini.
Uthi intombi kaSanele ibambe iqhaza elikhulu ekubeni aboshwe njengoba bafike bakhuluma nayo yasho ukuthi ubesevele eyixoxelile ngalokhu abebekwenza nomngani wakhe.
“Ubeyintombazanyana enesibindi ngoba noma esefakaza ephambi kwakhe, akazange asishintshe isitatimende salokhu abesitshele khona,” kusho yena.
Uthe uSanele uveze ukuthi okubenze bangena kwaMzila wukuthi babone kunefasitela elivulekile futhi bazi ukuthi endlini enkulu kunabantu besifazane, okuholele ekubeni baqale ngokubulala abesilisa ababili abebelele endlini engaphandle.
“Bangene ngaphakathi beyobakhuthuza babe sebeyababulala ngesikhulu isihluku, badlwengula intombazane yakhona embhedeni womfowabo. Isifiso sami esikhulu manje wukuthi balulekwe ngokomqondo (abakwaMzila) ngoba bayakudinga kakhulu,” kusho uSgt Dlamini.
UBrigadier Bongi Ntuli, okwenzeke lesi sigameko ngaphansi kwesiteshi sakhe, uncome umsebenzi osezingeni eliphezulu owenziwe nguSgt Dlamini noDet Sgt Shange wathi bebengalali beqoqa ubufakazi, bekhuluma nabantu abahlukene.
“Kubalukile ukuthi sincome ukusebenza kwabo ngokuzikhandla kanti sinethemba lokuthi nabathintekayo bazophola ezinhliziyweni ngoba sesiboshiwe isikhohlakali. Sibonga namalungu omphakathi asebenzisana nathi uma kunesimo esikanjena,” kusho uBrigadier Ntuli.
ABASESHI abebengamele amacala awu-20 abebhekene noSanele Makhanya ogcine egwetshwe iminyaka ewu-300 emasontweni amabili adlule. Kkwesobunxele nguDetective Sergeant Sifiso Shange noSergeant Bonginkosi Dlamini.